Akụkọ - workingkpụrụ ọrụ nke valvụ eletrik eletrik
Bọọlụ eletrik eletrik nwere ihe ntụgharị 90 ogo. Ọkpa ọkpa bụ okirikiri nke nwere okirikiri site na oghere ma ọ bụ ọwa na-agafe na axis ya. A na-ejikarị valvụ bọọlụ eme ihe na pipeline dị ka valvụ bọọlụ eletrik iji bepụ, kesaa ma gbanwee usoro ntụgharị nke ọkara. Naanị ihe ọ dị mkpa ka ọ gbanwee 90 degrees na obere torque iji mechie nke ọma. Bọọlụ bọọlụ kachasị mma maka ojiji dị ka ịgbanwee na valvụ mechiri emechi. Mmepe ahụ emeela valvụ bọlbụ ka ọ na-emegharị ma na-achịkwa mmiri ahụ, dị ka valvụ bọọlụ V. Uzo di iche iche nke valve eletriki eletrik bu ihe nkwekorita ya, nkpuchi kwesiri ntukwasi obi, ihe di mfe na ndozi kwesiri. Uzo a na-emechi akàrà na thedị dị obosara na-abụkarị ọnọdụ emechiri emechi, nke anaghị adị mfe imebi site na ọkara. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ na ilekọta. O kwesịrị ekwesị maka mmiri, ihe mgbaze, acid na gas nkịtị. Onye na-arụ ọrụ ahụ dịkwa mma maka onye na-ajụ ya yana ọnọdụ ọrụ ya siri ike, dịka oxygen, hydrogen peroxide, methane na ethylene, wdg, bụ ndị a na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ dị iche iche. Bọọlụ valvụ ahụ nwere ike ịbụ ihe njikọ ma ọ bụ jikọtara ya.
Ngwunye valvụ eletrik bụ ngwakọta nke ihe nkwụnye bọl na-arụ ọrụ na eletrik eletrik. Bọọlụ ahụ bọọlụ bọọlụ bọọlụ bụ spool na-agbaghari ogo 90. Onye na-arụ ọrụ eletrik na-etinye akara ngosi akara ngosi nke 0-10 mA. Otu igwe na-eme ka uzo na ikpuru osisi worm. Gbanwee valvụ ahụ na igbe ngbanwe. Ojiji ya bu ihe emeputara site na oke oru na nhazi.
Ndị ọrụ eletrik a na-ejikarị eme ihe na-agụnye ọtụtụ ntụgharị, otu-ntụgharị, ọgụgụ isi, nkeji iri na anọ, ndị na-arụ ọrụ eletriki eletriki, ndị na-agbawa mgbawa na ndị na-arụ ọrụ obere. Ngwunye bọọlụ ndị a gụnyere gụnyere valvụ na-ese n'elu mmiri, valvụ bọọlụ edozi, valvụ bọọlụ O-yiri, V, na bọọlụ atọ nwere ụzọ atọ. Ngbu na nhazi valvụ nwere ike ịmepụta ngwaahịa dị iche iche. Younwekwara ike ịgbakwunye igbe nchịkwa maka ịrụ ọrụ dịpụrụ adịpụ, ma tinye ngwa ndị ọzọ na onye na-eme ihe ahụ iji nweta ngwa ndị ọzọ na-arụ ọrụ, dị ka ịgbakwunye ihe eletriki eletrik iji dozie mmụba, a ga-eji ndị na-eme mgbanwe ntụgharị / nkwụnye ọnọdụ dị ugbu a iji chịkwaa valves. Ngosipụta na njikwa nke oghere ọnọdụ, enwere ike iji aka aka rụọ ọrụ aka mgbe ọ na-enweghị ugbu a, na ngwa ndị ọzọ a na-ejikarị eme ihe gụnyere mkpuchi mkpuchi, mgba ọkụ na-egosi mgbawa, wdg. Enwere ike ịhọrọ nhọrọ izizi dịka ọnọdụ ọrụ si arụ ọrụ. .
A na-eji akaụntụ valvụ eletrik eletrik eme ihe ugbu a na mmanụ, gas nkịtị, ọgwụ, nri, ike mmiri, ike nuklia, ọkụ eletrik, mmiri na drainage, ikpo ọkụ, ọrụ nyocha na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ma ha bụ ngwaahịa dị egwu maka nrụpụta nchekwa mba. Ọ bụkwa ngwaahịa dị oke mkpa maka owuwu teknụzụ. Ọ na-enweta ọtụtụ ahịa ahịa, ọ bụ n'ihi ọtụtụ ihe kpatara ya dị ka ọrụ siri ike, obere nha, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ikike mgbasa ozi buru ibu, ndị ọkụ na ndị dị ọnụ ala, yana njikwa akara nke bọlbụ eletrik. Electric valvụ valves na-abụghị nanị throttling, mechisịrị ọnụ, bepụ, wdg A ọma ngwaahịa maka na-anya na ntoonu, ma ọ bụ a di ọku ngwaahịa nke oke na a eruba usoro usoro. O nwere otutu njirimara dika iguzogide nsogbu, iguzogide okpomoku, iguzogide corrosion, mmeghari uzo di ala, ndu oru di ogologo, na uzo di omimi.
Post oge: Jun-12-2021